Tag: fantaro ny fitarihana | Martech Zone
Tag: mamantatra mitarika
Ahoana no ahafahan'ny orinasanao mamadika ireo mpitsidika tranonkala tsy fantatra ho lasa mpitarika
Alatsinainy Oktobra 13, 2014 Talata, Jona 16, 2015 Douglas Karr
Nandritra ny taona lasa, nanandrana vahaolana isan-karazany izahay ho an'ny mpanjifanay B2B hahafantarana marina ireo mpitsidika tranonkala. Mamangy ny tranonkalanao isan'andro ny olona - ny mpanjifa, ny mpitarika, ny mpifaninana ary koa ny haino aman-jery - saingy ny fanadihadiana mahazatra dia tsy manome fahitana ireo orinasa ireo. Isaky ny mitsidika ny tranonkalanao ny olona iray dia azo fantarina amin'ny adiresy IP azy ireo. Io adiresy IP io dia azo angonina amin'ny vahaolana avy amin'ny antoko fahatelo, ny fanondroana ampiana ary ny fampitana ny vaovao
Ny fantsom-pivarotana varotra B2B: Mamadika ny tsindry ho mpanjifa
Alahady, Jolay 27, 2014 Douglas Karr
Inona ny fantsom-pivarotana? Na amin'ny sehatry ny asa aman-draharaha (B2B) na ny orinasa ho an'ny mpanjifa (B2C) dia miasa ny orinasam-pivarotana mba hamaritana ny isan'ireo fitarihana izay ezahin'izy ireo hivadika ho mpanjifa. Izany dia manome azy ireo vinavina raha hanatratra ny tanjon'ny fikambanana izy ireo raha ny amin'ny fanisana sy ny sandany. Izy io koa dia manome departemanta marketing miaraka amin'ny fahatsapana fa maika ny
ActiveConversion: Fantaro ary araho ireo mpitsidika tranonkala
Zoma, Aprily 4, 2014 Douglas Karr
ActiveConversion dia lozisialy fanarahana fitarihana ho an'ny orinasa madinidinika. Ny vahaolana varotra sy varotra ataon'izy ireo dia ahafahan'ny orinasa mamantatra ireo mpitsidika liana, orinasa ary mpitarika mahay mitsidika ny tranokalanao. Ny tatitra voalahatra momba ny fitarihana mahay dia azo alefa any amin'ny ekipan'ny varotrao hampahafantatra azy ireo ny vina amin'ny Internet mavitrika indrindra. Ny teknolojia fanarahan-dia an'ny ActiveConversion dia afaka mamaritra ny hetsika ataon'ny mpandray ny mailaka sy ny valiny amin'ny tolotra mailaka. Ny vahaolana aza dia mety hanome fahitana manerana ny fantsonao